Archive du 20180403
Ambohimahasoa Dahalo 7 nodoran’ny fokonolona
Dahalo miisa 7 tamin’ireo manodidina ny 60 nanafika no lavon’ny zandary sy ny fokonolona rehefa avy nanao fanafihana tao amin’ny amin’ny kaominina Ankafina-Tsarafidy, any Ambohimahasoa, Faritanin’i Fianarantsoa iny, ka nodoran’ny olona avokoa ny vatan’izy ireo omaly noho ny hatezerany.
Fanakantsakanana atao amin-dRajoelina Sao dia sinema fotsiny ?
Mahalasa saina sy mampieritreritra ny fihetsiky ny mpitondra HVM tarihin-dRajaonarimampianina sy i Andry Rajoelina amin’izao fotoana. Rehefa dinihina sy halalinina mantsy, dia karazan’ny manao sarin’ady ihany. Toa mody mifanenjika sy mifanaratsy, saingy maivana sy tsy misy fiantraikany firy raha ampitahaina amin’ny ankasoparana atao amin’i Marc Ravalomanana.
CENI Madagascar Tena mahaleotena tokoa ve ?
Tsy misy herijika intsony ny Malagasy fa miaina ao anaty fahasahiranana tanteraka, antony andehanana amin’ny fifidianana izay kihon-dalana stratejika ho an’ny firenena amin’ity taona ity.
Fandaniana lalàm-pifidianana Mirona any amin’ny gidragidra
Hiverina eny amin’ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza indray manomboka anio ny mason’ny mpanara-baovao taorian’izay fiatoana lavalava izay.
Vahaolana ara-toekarena hanavotana ny firenena Misy manakana any ho any
Manana mpahay toekarena maro ny Malagasy kanefa dia tsy tafarina fa mikatso tanteraka ny toekaren’i Madagasikara. Maro ny fanehoan-kevitra nivoaka nataon’ny mpahay toekarena nandritra iny fihaonambe nasionaly ara-toekarena andiany voalohany izay natao tetsy amin’ny Carlton iny.
Depiote HVM Natao “Résidence surveillée ” teny Ivato
Mampanontany tena ny maro ny tena antony nanatanterahana fivoriana mihiboka an-trano teny amin’ny hotely lehibe kintana 5 Le Paon d’Or Antanetibe Ivato ho an’ireo depiote mpomba ny fitondrana HVM.
Miteny ny sary
Miarahaba jean a ! nety ihany ve ny kajy teny Ivato sy ny manodidina teny sa ahoana e ? Tsy hanaiky mihitsy mantsy ianareo fa tena mandrehetra tany mena mba hahalany ilay lalàna metimety aminareo a.
Vidin-tsolika Atao fitaovana politika
Tsy « poisson d’avril » fa tena izy ! Niakatra indray ny vidin’ny solika teto Madagasikara ny alahadin’ny paska 1 aprily lasa teo. Samy nahitana fitomboany 90 ariary isaky ny litatra na ny lasantsy na ny gazoala.
Marc Ravalomanana Tsy mbola miresaka politika aloha
Raha tsy re feo elaela Atoa Marc Ravalomanana dia niverina nitety faritra sy nifampiserasera mivantana tamin’ny vahoaka indray nanomboka ny faran’ny herinandro teo.
Fiofanana CNaPS – FLM Tsy Diso anjara i Toamasina
Anisan’ireo synodam-paritany tsy diso anjara tamin’ny fiofanana avy amin’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ny FLM Toamasina. Tonga nitarika ny delegasionan’ny mpampiofana andriamatoa Andriantsalama Manan’Iala izay talen’ny informatika eo anivon’ny CNaPS foibe.
Tobim-piantsonana Andohatapenaka Manomboka maloto sy gaboraraka
Tsy araka ny nanampoizana azy ny zava-mitranga eny amin’ny tobim-piantsonana vaovao Andohatapenaka ankehitriny. Ankoatra ny fidiran’ny mpanera sy ny fisian’ireo mpivarotra mandehandeha araka ny efa nitaterana azy teto amin’ny gazety Tia Tanindrazana dia efa manomboka maloto sy gaborakaka tanteraka ihany koa ny eny an-toerana amin’izao.
Toamasina II Mirongatra ny ady tany
Mirongatra ny ady tany ao amin’ny distrikan’i Toamasina faharoa. Tafakatra 50 isa hatreto ny fitarainana voarain’ny fikambanana HAFARI Malagasy any an-toerana, tarihin’ny filohany Rtoa Flavie Alexandrine.
Seranam-piaramanidina Ivato Misy mpangalatra entana
Mahagaga ihany raha seranam-piaramanidina iraisam-pirenena toy ny eny Ivato, no andrenesana mpandeha voaendaka sy voasoloky eo am-piondranana sy eo am-pahatongavana.
« Rugby Top 6 de l’Océan Indien J-3 » Mbola mitarika an’isa ireo klioba Malagasy
Nisaraka ady sahala 20-20 ny FT Manjakaray sy ny Etang Salé RCa avy atsy La Réunion tetsy Mahamasina tamin’ny alahady 01 aprily 2018, teo amin’ny andro faha-3 amin’ny fifaninanana TOP 6 Rugby de l’Océan Indien 2018.
Judo – Tompondakan’i Madagasikara toutes catégories Nisongadina ny fampiharana an’ireo lalàna vaovao
Atleta niisa 368 avy amin’ny klioba 25 anatin’ny ligy 8 eto amin’ny nosy no niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka “toutes categories” ny taranja judo nandritra ny hateloana ka nifarana ny sabotsy 31 martsa teo tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano eto Antananarivo.
Hanangana ny maty
Arakaraka ny tohivakan’ny krizy teto amin’ny firenena no nahatsikaretana fa nitombo hatrany ny fahapotehana ara-batana, indrindra ara-moraly sy ara-panahin’ny vahoaka malagasy. Tamin’ny tolon’ny 1947 dia vitan’ny Gasy ny nanohitra basy aman-tafondro tamin’ny tanam-polo.
Hopitaly HJRA Ampefiloha 3 namoy ny ainy nandritra ny fety
Tafakatra telo ireo namoy ny ainy nandritra ny fety, telo tratry ny fahapoizinana ara-tsakafo. Tafakatra telo ireo olona namono tena nentin’ny fianakaviana nanatona ny hopitaly HJRA Ampefiloha nandritra ny fankalazana ny fetin’ny paska lasa teo.
Fampiroboroboana ny indostria Hampandroso haingana be ny toekarena
Saika mitsipozipozy avokoa ny seha-pihariana misy ankehitriny eto Madagasikara. Anisan’izany ny sehatra Indostria izay vitsy eto. 80 monja ny mpikambana ao anatin’ny sendikan’ny Indostria eto Madagasikara kanefa ireo dia mampiditra 916 miliara isan-taona ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana ary mampiasa mpiasa 600 000.
Fialam-boly Mitombo isa ireo trano fijerena sarimihetsika
Fialam-boly somary nangingina ary tsy dia re firy intsony ny fijerena sarimihetsika na ny sinema eto amintsika. Efa manomboka miverina amin’ny laoniny anefa izy io ankehitriny.
Horonantsary Gisa Mainty II Nahazo ny anjarany ny tetezamitan-dRajoelina
Nahafa-po sy nampiala-voly tanteraka ireo tonga nanatrika tetsy amin’ny Roxy sy Rex ary Ritz omaly alatsinainin’ny paska 2018 ny nijery an’ilay horonantsary novokarin’ny Scoop Digital nampitondrainy ny lohateny hoe : Gisa Mainty II.
Tsy fandriampahalemana mirongatra Porofon’ny fahalotoam-pitantanana
Raha ny fangalarana omby mba hahazoam-bady no nahafantarana ny asan-dahalo tany Atsimo tany aloha dia niitatra ho tena asa ratsy tsy mifono kolontsaina intsony ny taty aoriana. Ankehitriny aza moa dia efa miitatra any amin’ny fandrobana sy fanolanana.
I Claudia Navalonirina Raobelina, 22 taona, mpianatra eny amin’ny ESPA vontovorona, lalam-piofanana BTP, taona fahefatra, sady mianatra teny anglisy eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo,